Flim2MM: Kick (2014)
ဒီကားလေးက bollywood မင်းသား ဆလက်မန်ခမ်း ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာတော့ရိုင်နာဆိုတဲ့ မင်းသမီးဟာ သူမအဖေ၏ စကားအရလူတစ်ဦးနဲ့သွားရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်ထိုသူသည်ရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်၍ နာမည်ကျော် လူဆိုးဖမ်းအရာရှိတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည် ရှိုင်နာ နဲ့ ထိုရဲအရာရှိတွေ့ဆုံပြီး လက်ထပ်ဖို့ ကိစ္စဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း အတိတ်ဇာတ်လမ်းကိုသာ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်ရိုင်နာ၏ အတိတ်မှာတော့ မေ့မရခဲ့တဲ့ချစ်သူ ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
သူ၏ အမည်မှာဒေးဗစ်ဆင်းဂ် ဖြစ်သည်။
သူသည် လူအများအား စနောက်သန်သူဖြစ်၍ ကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့မှာ သူမ၏အဖေနှင့် တွေ့ပြီးအပြန် သူမက အလုပ်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းလေသည်။ ထိုအခါ ပျော်စရာဘ၀နှင့် လူတို့အပြုံးသာလိုလားသော သူတစ်ပါးအားအောက်မကျို့သော ဒေးဗစ်ဆင်းဂ်တို့စကားအနည်းငယ်များပြီး ဒေဗစ်ဆင်းဂ်မှာ
ရှိုင်နာနှင့် အဆက်အသွယ်မရှိတော့ပေ။အရာရှိမှာလည်း သူ့ဘ၀တွင်မေ့မရတဲ့ လူတစ်ဦးရှိကြောင်း၊ထိုသူသည် ဒီးဗဲလ်သူခိုးတစ်ဦးဖြစ်၍ထိုသူသည် ကြိုတင်အသိပေးပြီးမှခိုးယူသူဖြစ်ကြောင်း၊မျက်နှာဖုံးတစ်ခုအားကာဗာယူ ခိုးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်၍ ထိုသူအားလည်းမမြင်ဖူးကြောင်းမည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသူအား ဖမ်းမိရန်မိမိမှာ တာဂန်အပြည့်ရှိကြောင်းရိုင်နာအားပြောပြခဲ့လေသည်။သူတို့နှစ်ဦး အိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်ခရီး တွင်
လူတစ်ဦးက သူသိလိုသော လိပ်စာအားရှိုင်နာအား လာမေးရာထိုသူသည် ဒေးဗစ်ဆင်းဂ် ဖြစ်သော်လည်း
ရှိုင်နာအား မသိသလိုတကယ်ပင် အတိတ်ပင်မေ့နေသလောဟန်ဆောင် နေသလောရှိုင်နာ၏ အိမ်တွင် နေ၍ မည်သို့အကွက်ရွေ့ မည်သို့ခိုးယူခြင်းလုပ်မည်ကိုလည်းကောင်းရဲအရာရှိအားပင် ပခုံးဖက်၍ မိမိဒီးဗဲလ် အမည်ဝှက်ဖြင့် သူခိုးတစ်ဦးမှန်းမသိအောင်ပိပိရိရိနေတတ်ခဲ့သည်ထို့နောက် ဒေးဗစ်ဆင်းဂ် ခေါ် ဒီးဗဲလ် သည်မည်သို့သာအကြာင်းကြောင့် ခိုးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြာင်းအောက်မကျို့တတ်သော ဒေးဗစ်ဆင်းဂ်တစ်ယောက်
မည်သို့သောအခြေအနေတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၍သူခိုးဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမှာပါထို့အပြင် ရဲအရာရှိ ကလည်း ဒေးဗစ်ဆင်းဂ် ခေါ်ဒီးဗဲလ်အား မည်သို့ကြိုးစား ဖမ်းဆီးမည်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါရဲအရာရှိ ကပင် ဖမ်းမိမလားဒီးဗဲလ်ကပင် လွတ်မြောက်မလားဒီးဗဲလ်ဆိုသူမှာလည်းသာမန်သူခိုးမဟုတ်ပဲမည်သို့သောသူဖြစ်မည်ကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရမှာပါဒီကားလေးဟာ သတွေနဲ့ပြည့်သလိုလူလူချင်း မည်သို့ကိုယ်ချင်းစာရမည်ကိုလည်းညွှန်းဆိုထားပါတယ်အချစ်အလွမ်းတွေနဲ့ ကြည်နူးရသလိုအကြမ်း အတမ်းတွေနဲ့ ဖလန်းဖလန်းထကစ်ကွက်ကလည်းအစုံမို့လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့
IMDB 5.5 ရရှိထားပြီး 2h:26mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 944 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 4:00:00 AM
Labels: Action, Bollywood, Comedy, Romance
Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ဇာတ်လမ်းအသစ်များရယူပါ
Flim2mm APK Download
Flim2mm APK Pcloud
Iron Man 1+2+3
တစ်စုတစ်စည်းထဲ ပြန်ပေါင်းထုပ်ထားပါသည်။ (Google Drive+Openload) Stark Industries ရဲ့ သူဌေးကြီး Howard Stark ရဲ့ သား Anthony Stark က...
Kya Dilli Kya Lahore (2014)
၁၉၄၈ ခုနှစ် ကက်ရ်ှမီးယား နယ်စပ် အရေးကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် စစ်ဖြစ်ကြတယ် ။ စစ်တွေ ဖြစ်ရင်း တောတွင်းတစ်နေရာမှာ အိန္ဒိယစစ်သား တစ်ယောက်...
Line Walker (2016)
အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းတကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2016 ထွက် တရုတ်အက်ရှင်ကားပေါ့။ ဘာသာပြန်သူကတော့ [FORMAT]:………………………….:) 720p BluRay /...
A Single Shot (2013)
အကြောင်းအရင်းရှိလို့ အကျိုးဆက် ဖြစ်လာစေပါတယ်... အဲဒီ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုထဲကပဲ အကျိုးဆက်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်... ဒီ...
BC 2016 ခုနှစ်မှာ Mohenjo Daro မြို့ထဲမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လယ်သမား၊ တံငါသည်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးအကြောင်းကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းအ...
မဂိုအင်ပါယာသည် အာရှသမိုင်းတွင်ထင်ရှားပြီး အိန္ဒိယတွင် ၁၅၂၆ မှ ၁၈၅၈ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကြာခဲ့သည့် အင်ပါယာကြီးဖြစ်သည်။ သို့ သော...
Zindagi ကို ဘဝ (life) လို့ အဓိပ္ပါယ်​ ဖွင့်ဆိုထားတာမို့ ဇာတ်ကားနာမည်နဲ့တင် ပုံမှန်တွေ့နေကျ ကျောရိုးတွေနဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ကားမျိုး မဟုတ်မှန်းေ...
၂၀၀၈ လောက်ကထွက်တဲ့ရှရွန်ခမ်းရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ အလုပ်ကလွဲရင်ဘာမှမသိတဲ့အူတူတူကိုရေခဲတစ်ယောက် ကောလိပ်ဆရာ သမီးမင်္ဂလာဆောင်သွားရာမှမမျှော်လ...
အစိုးရနဲ့ ဥပဒေကို စိန်ခေါ်ရအောင် နင်က ဘာမို့လို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေက ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ပုံစံထဲက ဖောက်...
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အညွှန်းရေးဖို့ အချက်အလက်လိုက်ရှာတော့ ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့တယ်။ Online စွယ်စုံကျမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ Wikipedia မှာ Histor...
A Stranger in Paradise (2013)
The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)
Ronal the Barbarian (2011)
Happy End (1999)
Memories of the Sword (2015)
Plum Blossom (2000)
21 & Over (2013)
Detective K: Secret of the Lost Island (2015)
shankar's i (2015)
Warsaw '44 (2014)
Kun Fu Fighter (2013)
Dead Snow 2: Red vs. Dead (2014)
The Man from Macau (2014)
Dear John (2010)
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) မြန်မာစာ...
The Marine 4: Moving Target (2015)
Pee Mak (2013)
Mirrors2(2010)
Cold Eyes (2013)
Rurôni Kenshin 3: The Legend End (2014)
Rurouni Kenshin 2: Kyoto Inferno (2014)